China Brush Machine Mugadziri | MeiXin Brush Mashini
Tarisa pane yakasarudzika High Speed ​​Brush Machine kubvira 2003.
Iwe unovimba nesu, Meixin nyanzvi Brush muchina kugadzira.
3 Axis Hockey Brush Kugadzira Mashini
FMX kufoira inobvumira kuchinja nekukurumidza pamusoro peiyo nyowani bhurandi yakangogadzirwa.
4 Axis Chimbuzi Brush Tufting Machine
Iine misodzi imwechete inodzungudza, yakazvimiririra ina axis kufamba, yaishandiswa padiki denderedzwa chimbuzi burashi, vamwe.
2 Axis Broom Kubata Muchina
Kupfeka Mabhurashi Nemisodzi imwe chete inodzungudza, yakazvimiririra 2 axis kufamba, yaishandiswa PAKUTSI flat maburashi mashini.
5 Axis uye 1 Kuburutsa Brush Machine
Yakanakisa mhando shanu axis 3 misoro 2 kudhirowa uye 1tufting brashi yemuchina wechimbuzi bururu.
Sisitimu yekushandira seyakasiyana kana inonetsa bhizinesi zvido.
Isu tichaita sekuenderana nevatengi vedu samples yekugadzira muchina .Tinogadzira masayizi akasiyana emitsvairo. Saizi yemutsvairo size: 400 * 60mm. Kana iwe uchida kugadzira iyo yakakura saizi kana imwe yakakosha mabhuru, tinoda kuitisa.
Kunyanya, yeiyo roller brashi
& disc brashi muchina, uyu mhando webrashi unowanzo shandisa muindasitiri yemisiyano yekukura mutsauko. ndicho chimwe chezvikonzero zvinoda kugadzirisa.
1. Kubvunza: Vatengi vanotaurira izvo zvinodiwa uye zvinotevedzwa zvinodiwa.
2. Dhizaini: Chikwata chekugadzira chakabatanidzwa kubva pakutanga kweprojekiti kuti ive sosi yakagadzirirwa zvigadzirwa kuti ikwane nezvinodiwa nevatengi.
3. Kugadziriswa Kwemhando: Kuti tiwane zvigadzirwa zvepamusoro-soro, isu tinoshandira anoshanda& inoshanda Yekugadziriswa kweMhando yepamusoro
4. Mass Kugadzirwa: Kamwe chete prototypes akave akagadziridzwa ekugadzirwa maererano ne fomu, basa, uye kudiwa, kugadzirwa ndiyo nhanho inotevera.
5. Isu tinokwanisa kuronga zvekufambisa nekuda kwemadhairesi - kungave kuburikidza nemukati medu masevhisi, vamwe vatengesi kana musanganiswa wezvose zviri zviviri.
Wooden base Flat brashi Muchina wakagadzirwa ne MEIXIN kugadzira PZ-18
I $ $> Wooden base, Imwe Chiso, Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi Ifirimi kunze kwemakomba.
India phool jhadu mutsvairo wekugadzira - CNC hapana guruva mutsvairo KUGadzira Machine
Yedu fekitari JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED iyo inonyanya kushongedza mutsvairo nekugadzira brashi. Isu tiri vekugadzira tekinoroji yepamusoro uye tine ruzivo rwakanaka mune ino mutsetse tatova ne30years. Iwe unogona kusvika kune yedu chigadzirwa zita. Zvakadai sekuti hapana guruva remuchina. otomatiki Hakuna Dust Broom Kugadzira Muchina. Yakazara India Phool Jhadu Broom Kugadzira Muchina. India phool jhadu mutsvairo wekugadzira - CNC hapana guruva mutsvairo KUGadzira Machine.
Isimbi Wire muchina weFlat brashi yakagadzirwa ne MEIXIN kugadzira PZ-03
FMX kufoira inobvumira kuchinja nekukurumidza pamusoro peiyo bhurashi nyowani yakangogadzirwa. Ruzha rwakaderera 3 axis cnc FAN BROOM muchina wekugadzira brashi ne2 grippers.
Roller burashi muchina wakagadzirwa ne MEIXIN kugadzira PZ-02
Fekitori yedu inoshongedzwa kugadzira maviri kusvika mashanu axis single (kaviri) color brashi muchina, CNC tufting muchina, CNC tufting nemuchina wekudhirowa, CNC kudhiraivha uye tufting musanganiswa muchina, Filament trimming muchina, Filament yekucheka muchina.Zvino zvigadzirwa anoshandiswa zvakanyanya mumarudzi ese emabhurashi, semuenzaniso: mutsvairo (epurasitiki nehuni) yekuchenesa bhurashi, mazino emagetsi, kufamba kwemazino, bhurashi rekushambidzika, zvipikiri zvekupfekedza bhurashi, indasitiri yekudhirowa brashi, strip brashi, denderedzwa bhulashi, ndiro yekugeza shawa, muzinga , brashi rematanda uye zvichingodaro.
Isu takakunda akawanda certification echigadzirwa chedu maererano nemhando
JIANGMEN MeIXIN COMB BRUSH KUgadzira MACHINE DZIDZO, Kubva 2003, kambani yedu iri kugadzira imba 2-5axis dzimba uye maindasitiri brashi uye mutsvairo michina, yekuchekerera uye yekumakina michina, pneumatic yekucheka muchina. Yayo inoshandiswa kugadzira mhando dzakawanda dzemabhurashi emumba. Zvakadai, mabhureki echimbuzi, mutsvairo, hockey brashi, bvudzi bhurosi, bhodhoro bhurasho chero chimiro chemabhurashi. Kune mabhizimusi emabhizimusi akadai: Roller brashi, disc bhurawu yemugwagwa, uye zvimwe chimiro chemabhurashi.
Munguva yemakore mashoma apfuura, yedu Kwete 1 yekutanga yakangogara iri basa revatengi uye kugutsikana kwevatengi. Isu takaita zvakawanda kusimudzira hunhu hwemhando yepamusoro uye nekuedza kusimudzira gadziriro yemhando yepamusoro uye sisitimu yekusimbisa. Uyezve, kambani yedu yawana zvigadzirwa zvekupa patent uye iyo CE certification.